Hygh Hope, 333 54th Street 1FL, Brooklyn, NY (2020)
"We Don't Make Products, We Make Artworks"
👹 #ဆုံးဖြတ်ရခက်ပြီး_လမ်းတွေ_ပျောက်နေပြီ 👹
Style 01 ဆိုရင် ( ❤️-Love ) ပေးပြီး
Style 02 ဆိုရင် ( 👍-Like ) ပေး‌ပေးကြပါအုံး ဗျို့
ဒီ နေရာမှ ပြောစရာလေး တစ်ခု ရှိပါတယ်
Style 01 ဆိုရင်တော့
ချည်ထိုး ( Embroidery ) နဲ့ လာမှာ ဖြစ်ပြီး
Style 02 ဆိုရင်တော့
ဆေးရိုက် ( Digital Print ) နဲ့ လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်
အဓိကကတော့ 1990 ပြည့်လွန် နှစ်တွေမှာ
#လေဟာပြင်ဈေး ( ဘေထုပ်ဆိုင် ) တွေနဲ့
ကိုဖိုးကျော် ( မင်းသား အကယ်ဒမီ ဖိုးကျော် ) ရဲ့ ဆိုင်မှာ
သူများနဲ့ မတူတဲ့ Fashion တွေကိုမှ
ရူးရူးသွပ်သွပ် ဝတ်ချင်ခဲ့တဲ့ လူငယ် တစ်ယောက်
အဝတ်အစား အရောင်/ပုံစံ/ဒီဇိုင်း အဆန်းတွေကို
တကူးတက လိုက် ရှာ ဝယ် စုဆောင်းတဲ့ အချိန်က စ လို့
ရှားပါး ဂျင်း ( Denim ) တွေကို ကြိုက်ခဲ့ ရူးခဲ့ရတယ်
ပိုလည်း ရှားပါးသလို ဈေးလည်း အများကြီး ပိုကြီးတဲ့
Self Edge ( Selvedge ) / RAW Denim တွေကို
ပိုပြီး ရူးသွပ် ခုံမင်ခဲ့ပေမယ့်
ဈေးတွေ မတတ်နိုင်လို့ တော်ရုံနဲ့ အနား မကပ်နိုင်ခဲ့ဘူး
( ဒါတောင် အသစ်တွေ မဟုတ်တဲ့ ဘေထုပ်ထည် နော် )
ခု ကိုယ်တိုင် HYGH HOPE ဆိုပြီး
ကိုယ် ဆယ်ကျော်သက်ထဲက တမ်းတမ်းမက်မက် ရူးတဲ့
Fashion Product တွေ စ တင် ထုတ်လုပ်နိုင်လာတဲ့
အခြေအနေလေး တစ်ခု ဖြစ်လာတော့
တချိန်က ကိုယ် သိပ် ရူးခဲ့ရပြီး အနား မကပ်နိုင်ခဲ့တဲ့
Selvedge/RAW Denim တွေပေါ်မှာ
ကိုယ် သိပ် မြတ်နိုးရတဲ့
မြန်မာ့ရိုးရာ ( သို့မဟုတ် ) ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးမှု
တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခု ကို ရအောင် တင်ပြီး ထုတ်မယ် လို့
ခု ဒီ Projectလေးကတော့
ကျနော် နဲ့ Hygh Hope ရဲ့ RAW Denim ခရီးရဲ့
အစဦးဆုံး ခြေလှမ်းလေး ဖြစ်မယ် မျှော်လင့်ပါတယ်
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်က ငေးကြည့်ခဲ့ရတဲ့
ခုလို Selvedge/RAW Denim တွေ
ကိုယ်တိုင် ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ် လို့
ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်ကူး မယဉ်ရဲခဲ့ မယဉ်ဖူးခဲ့ပါဘူး
ပထမဦးဆုံး RAW Collection ရဲ့
ပထမဦးဆုံး Product ကို
အရေအတွက် ( နဲနဲလေး ) နဲ့ အကောင်းဆုံး ( Quality )
မဖြစ် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး ထုတ်မယ်လို့
Quality ကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဈေးလည်း ကြီးတာမို့
အများကြီး မထုတ်နိုင်ရခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်
လမ်း အသစ် ဖောက်ထွက် ဖန်တီး ကြိုးစားမှုကို
ပြက်ရယ်မပြု မတိုက်ခိုက်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ
တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူး တကယ်ပါ!
🤎 ချစ်တယ် 🤎
📖🖋️ ကျနော် မသေခင် သမိုင်းလေး တစ်ရွက်လောက်
နောင်လာ နောက်သား လူငယ်တွေ အတွက်
ရေး ပေးခဲ့ချင်တာရယ်ပါ! 🙏
Hygh Hygh ကို ချစ်ရင် ပို့စ်လေး Share ပေးကြပါအုံး!
🔥💣🪄HYGH HOPE X [ ? ? ? ? ? ? ]🪄💣🔥
👹 X 🧜🏻‍♀️
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ 🙏
Hygh Hope ရဲ့ "ဘီလူး အပြုံး" Snapback ပို့စ်ကို
Share တဲ့သူ အားလုံး [ 917 ] ဦး ရှိတဲ့ အထဲမှာမှ
စည်းကမ်းချက်နဲ့ အညီ Screenshot ပို့တဲ့ သူ
အယောက် [ 710 ] ဦး ရှိပါတယ်
အဲ့ဒီ [ 710 ] ထဲကမှ [3] ဦး ကို
ယနေ့ 17-11-20 ( အင်္ဂါ ) ည ( ၉:၀၀ ) နာရီကျရင်
မဲနှိုက် ရွေးချယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ
*မှတ်ချက် : အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တစ်စုံတစ်ခု ရှိခဲ့ပါက
Hygh Hope Team ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကသာ
အားလုံးကို ကျေးဇူး တကယ်ပါ! 🙏
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ 🙏
စာကို ဆုံးအောင်လေး သေချာ ဖတ်ပေးပါ ခင်ဗျာ!"
ဒီနေ့ 11.11.2020 ဆိုရင်
HYGH HOPE Inc. ကို New York City, USA မှာ
စတင် တည်ထောင်တာ ၃ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ ခင်ဗျာ
Hygh Hope ရဲ့ 3rd Anniversary မှာ
Hygh Hope ကို ချစ်တဲ့ *Fam*ily တွေအတွက်
အထူး အစီအစဉ်လေး တစ်ခု ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီ 11.11.2020 နေ့ မှာ
အားလုံး မျှော်လင့် စောင့်စားနေကြတဲ့
"ဘီလူးအပြုံး Snapback by HYGH HOPE" ကို
Pre Order စတင် ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ
တစ်လုံး ၄၅၀၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ထားပေမယ့်
၃ နှစ် ( ၃၆ လ ) ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့
Pre Order စတင် ကောက်ခံတဲ့ နေ့ကနေ
၃ ပတ်အတွင်း ဝယ်ယူ သူများကို
တစ်လုံး ၃၆၀၀၀ ကျပ် နဲ့သာ
ရောင်းချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ
Pre Order - Full Prepaid ဖြစ်ပါတယ်
စတင် မှာယူသော ရက်မှ
မြန်မာပြည် သို့ ရောက်မည့် အချိန်
၁ လခွဲ ကနေ ၃ လ အထိ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်
အရောင်က Black/Yellow နဲ့ White/Teal နှစ်မျိုးပါ
Snapback မှာ အသုံးပြုမယ့် Material က Acrylic ပါ
Made In China ( USA Standard Quality ) ပါ
မူလ ဈေး ၄၅၀၀၀ ကျပ်
36 Months Anniversary ဈေး ၃၆၀၀၀ ကျပ်
တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူး တကယ်ပါ 🙏
Pre Order ပို့စ်ကို
Public နဲ့ Share ပြီး Screenshot ပို့ သူများကို
"ဘီလူးအပြုံး" Exclusive Edition ( Not For Sales )
PU Leather Snapback ( ၃ ) လုံး
ကံစမ်း မဲ ဖောက်ပေးမှာပါ ခင်ဗျာ
ခု "ဘီလူးအပြုံး" Snapback Pre Order ပို့စ်ကို
[ #hyghhope3rdanniversary ] လို့
Hashtag တပ်ပြီး Public ဖွင့် Share ပေးရပါမယ်
ပြီးရင် Share ထားတဲ့ ပို့စ်ကို
ခု Pre Order ပို့စ် အောက်မှာ Comment လာ ပေးပေးပါ
အဲ့ဒီ အထဲကမှ Winner ( ၃ ) ယောက်ကို
၃ ရက်ပြည့်တဲ့ အခါ ရွေးချယ် မဲ ဖောက်ပေးမှာပါ ခင်ဗျာ
🔥 #၃_ရက် အတွင်း နော်
#Hashtag လေး ထည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့အုံး ခင်ဗျာ 🔥
၃ ရက် ပြည့်သွားပြီမို့
Screenshot ပို့တာများ ရပ်နိုင်ပါပြီ ခင်ဗျာ
ခု မနက် ၉ နာရီ နောက်ပိုင်း ထပ် ပို့သည့်
မည်သည့် Screenshot ကိုမှ
ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်၌ ထည့်သွင်းပေးမည် မဟုတ်ပါ
ပို့ထားသည့် Screenshot ပေါင်း ( ၉၀၀ ) ကျော်ကို
ကျနော်တို့ ရေတွက်ပြီး စာရင်း အတိအကျ သွင်းမှတ်ရန်
( ၃ ) ရက် အချိန်ယူပါမည် ခင်ဗျ
စာရင်း သွင်းမှတ်ပြီးသည့် နောက် နေ့တွင်
Hygh Hope Page မှနေပြီး မြန်မာပြည် မနက်
( ၉ ) နာရီ အချိန် Live လွှင့် မဲနှိုက်ပေးပါမည် ခင်ဗျာ
ပါဝင် ကူညီ အားဖြည့်ပေးကြသော
အယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူး တကယ်ပါ 🙏
Hygh Hope ရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို
ဒဲ့ Copy ကူးတာမျိုး ခိုးယူတာမျိုး မဟုတ်ပဲ
Inspiration ယူ ဒီဇိုင်း တုပြီး
အင်္ကျီ/ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်တာမျိုးတွေ လုပ်လို့ရအောင်
တမင်ကို "ဒီဇိုင်း/Artwork" တွေ တင် တင်ပေးနေတာ
ကိုယ် ပြတဲ့ စားကျက်ကို ဝိုင်း စားကြလို့
အခြား မိသားစုတွေ ဗိုက်ဝကြတဲ့ ကိစ္စမျိုးမှာ
ကျနော်တို့က "ကုသိုလ်" ရတယ် လို့ပဲ မှတ်ယူတယ်
အဲ့တာ တကယ့် ရင်ထဲ စိတ်ထဲက စေတနာ နဲ့ မေတ္တာ
ဒါပေမယ့် တုလည်း တု ကူးလည်း ကူးသေး
Hygh Hope ကပဲ ကူး‌နေသလိုတော့
သူခိုးကဝောာ့ လူ ပြန် မဟစ်နဲ့လေ ဗျာ
နဲနဲပါးပါးလည်း အရှက်လေး ဘာလေး ရှိကြပါအုံး ဟ
ခုဟာက ယိုသူ မရှက် မြင်သူ ရှက်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုး
ခင်ဗျားတို့ ခုမှ ထုတ်တဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးကို
Hygh Hope က တင်ထားတာ နှစ်ပေါက်နေပြီလေ
အဲ့တော့ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို တုပကူးယူတာလဲ
မြင်တဲ့ သိတဲ့ သူတွေက
တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် လာ လာ ပြောနေကြတယ်
ကျနော်တို့က ကုသိုလ်စိတ် မွေးထားလို့
ခင်ဗျားတို့ အကုသိုလ်ပေါ် အကုသိုလ် ဆင့်မှာစိုးလို့
ခုလို အမုန်းခံပြီး ရေးလိုက်ရခြင်းပါ ဗျို့!
မြန်မာပြည် ၁၀ နာရီကျရင်
#HyghHopeArmy_Dogtags 80% #Sold_Out ပါ
ချစ်ခြင်းသက်သက်နဲ့ ဝိုင်း အားပေးကြတဲ့
HYGH HOPE Family မှ မိသားစုဝင်များကို
ကျေးဇူး အထူး တကယ်ပါ ခင်ဗျာ! 🙏
💥 ခု Hygh Hope Army Dogtags များ
ဝယ်ယူ အားပေးကြတဲ့ သူများကို
ဆွဲကြိုးများ 100% ရာခိုင်နှုန်း ကုန်သွားတဲ့ အချိန်
Surprise အစီအစဉ်လေး ရှိလို့
See First ထားကြပါအုံး နော့် . . . . 🤎 ချစ်တယ် 🤎
#လုံးဝ ထုတ် မရောင်းပေးတဲ့
HYGH HOPE ARMY Dogtags
"BELU Soldier" ဆွဲကြိုး
အကုံး "၁၀၀" ထုတ် ရောင်းပေးမယ် . . . . ဆို
👹 #အကုံး_၁၀၀_ထဲ_နော် 👹
ထူးခြားချက်က Limited Edition ကိုမှ
ပို Special ဖြစ်တဲ့ .... ဆွဲကြိုး တစ်ကုံး နံပါတ် တစ်ခု
ကိုယ် ရတဲ့ နံပါတ်က ကိုယ့်ရဲ့ #ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် ပဲ
စိတ်ကြိုက် နံပါတ်တော့ ရွေးလို့ မရပါဘူး ခင်ဗျာ! 👹
💥💥💥 တစ်ကုံး ၄၅၀၀၀
မြန်မာ တပြည်လုံး Delivery Free ပါ ခင်ဗျာ
HYGH HOPE ရဲ့
စ ရတော့မလား ဗျို့?!
ကုန်ကားတွေကလည်း ကုန် မရလို့ မထွက်ကြတာမို့
Hygh Hope ရဲ့ Neck Gaiter တွေက
မြန်မာပြည် ( တွင်း ) ကို ရောက်နိုင်ဖို့
လမ်းမှာ အချိန် ကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်နေပါတယ် ခင်ဗျာ
မမျှော်လင့် မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကိစ္စရပ်မို့
ကျနော်တို့လည်း ဘာမှ လုပ်မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်
အဲ့ဒီအတွက် စောင့်မျှော်နေကြသော သူ
တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို Hygh Hope မှ
အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ ခင်ဗျ
ရန်ကုန်တွင်လည်း လောလောဆယ် အထိတော့
ကုန်ကားများကလည်း ကုန်မပြည့်လို့ မထွက်ကြသေးပါ
ကားဂိတ်များ ဖွင့် ကုန်ကားများ ထွက်တာနဲ့
ချက်ချင်း အမြန်ဆုံး ပို့ဆောင်ပေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ!
Don't letaWin get to your Head.
OraLoss to your Heart.
You will always be our Champion!!
HYGH HOPE ရဲ့ Game Of Chance
"Game TWO" မှာ ဖြစ်သွားတဲ့
ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖြစ် အနှစ်လေး အကြောင်းပါ
HYGH HOPE အတွက်ရော
ကျနော် ( လင်းလွန်းလှမြိုင် ) အတွက်ပါ
တကယ်ကို အရေးပါ အရာရောက်တဲ့ အတွက်
ခုလို တခုပ်တရ ရေးပြီး ဖေါ်ပြရခြင်းပါ
မဖတ်ချင်က စိတ်မဝင်စားက ကျော်သွားပါ ခင်ဗျာ
ပထမဦးဆုံး ကိုMyat Khaing ကို
လေးလေးစားစား ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
GOC "Game TWO" Slot [ ၁၀၀ ] မှာ
ဖောက်တာကမှ မဲ ( ၅ ) မဲကို
ပထမ ( ၃ ) မဲ ဖောက်တဲ့ အထဲက
ကိုမြတ်ခိုင် တစ်ဦးထဲက ( ၂ ) မဲ ပေါက်တယ်
ဒုတိယ ( ၂ ) မဲ ထပ် ဖောက်တဲ့ အထဲက
ကိုမြတ်ခိုင်က ( ၁ ) မဲ ထပ် ပေါက်တယ်
သူ ဝယ်တာ Slot [ ၅ ] နေရာ
စုစုပေါင်း Slot [ ၁၀၀ ] ကနေ
( ၉၅ ) မဲ ပယ်ပြီး ( ၅ ) မဲပဲ ဖောက်တာကို
ကိုမြတ်ခိုင် တစ်ဦးထဲက ( ၃ ) မဲ ပေါက်တယ်
အဲ့ အစ်ကိုရဲ့ ကံကောင်းပုံကို အံ့ဩယူရတဲ့ အထိပဲ
ထပ်ပြီး အံ့ဩရပြီး အားကျ အတုယူမိတာက
သူ ပေါက်တဲ့ ( ၃ ) မဲကနေ
( ၂ ) မဲကို အခြား Hygh Hope Fam တွေ အတွက်
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြန် မဲ ဖောက်ပေးတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြီး
ပေါက်မဲ ( ၁ ) ခုက အနိမ့်ဆုံး ၁၂၅၀၀၀ ကျော်တယ်
( ၂ ) မဲ ဆိုရင် ၂၅၀၀၀၀/၂ သိန်း ၅ သောင်းမကဘူး
"ငါ့ အတွက်သက်သက်" တွေ များလာတဲ့ ခေတ်မှာ
ခုလို အပြုအမူမျိုး လုပ်လိမ့်မယ်
ခုလို လူမျိုး ရှိနေလိမ့်မယ် လို့ လုံးဝ မထင်ထားခဲ့ဘူး
တကယ်ကို ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လေးစားပါတယ်
ကျနော် စိတ် ဆန္ဒ ပြင်းပြင်းပြပြနဲ့
တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ နှစ်နှစ်ကာကာ မျှော်လင့်ထားတဲ့
HYGH HOPE Culture/Hygh Hope ယဉ်ကျေးမှု ကို
တည်ဆောက်နိုင်ပါ့မလား တည်ဆောက်လို့ ရပါ့မလား
ကိုယ့် ကိုယ် ကိုယ် နဲ့ အခြားသော လူတွေကို
အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ သံသယ ဝင် ဖူးတယ်
ခုတော့ #ကိုမြတ်ခိုင်လို လူတွေ
အများကြီး ရှိနေသေးတယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို
ရင်ထဲ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရ သွားတယ်
ကျနော် အစွမ်းကုန် ဆက် ကြိုးစားမယ်
ကိုမြတ်ခိုင် လို လူမျိုးတွေ
အများကြီး ထပ် တွေ့ရ ကြုံရမယ်လို့လည်း ယုံတယ်
HYGH HOPE ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က
လူတန်းစား အနိမ့် အမြင့် ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာဟမှု
ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ကွဲပြား ခြားနားမှု
အသားအရောင် အဆင့်အတန်း ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု
ကျား မ LGBTQ နှိမ်ချ ကျဉ်ဖယ်မှု တွေနဲ့
ခါးခါးသီးသီး ဆန့်ကျင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
HYGH HOPE ကို ချစ်တဲ့ သူတွေက
အားလုံးကို တန်းတူညီမျှ ချစ်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်တယ်
အားလုံးကို မခွဲခြား မနှိမ်ချ သူတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို
ဖြေးဖြေးချင်း သက်သေပြ တည်ဆောက်သွားမှာပါ
ခွဲခြား နှိမ်ချ ဆက်ဆံတတ်သူလား ဆိုတာကို
ကျနော်တို့က အပြင်ပန်းကနေ မမြင်နိုင်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ကာလ အချိန်တွေမှာ
HYGH HOPE Product တစ်ခုခု ဝတ်လာသူက
ခွဲခြား နှိမ်ချ ဆက်ဆံတတ်သူ မဟုတ်ဘူး
ဆန့်ကျင် တော်လှန်သူသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို
အားလုံး လက်ခံ သိမြင် ကျင့်သုံး လာတဲ့ အထိ
အစွမ်းကုန် ကြိုးစား တည်ဆောက်သွားမှာပါ
လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေး ၊ အသားအရောင်
အဆင့်အတန်း ၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ၊ ပညာ အရည်အချင်း
အာဏာ ဂုဏ် အရှိန်အဝါ ၊ အသိုင်းအဝိုင်း အနိမ့် အမြင့်
ကျား မ LGBTQ
တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခု ခွဲခြား ကြည့်မြင် ဆက်ဆံသူ ဆိုရင်
HYGH HOPE Product တွေကို မဝယ်ယူပါနဲ့
ခင်ဗျား လို လူမျိုးတွေ အတွက်
HYGH HOPE ပစ္စည်းတွေ ထုတ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ
We Don’t Give A F**k
Who You Are & What You Do.
F**k You If You Discriminate.
No Discriminatory Zone
In HYGH HOPE Family.
ကျေးဇူး အထူး တကယ်ပါ! 🙏
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျ 🙏
"Game Of Chance" By HYGH HOPE ရဲ့
Game TWO Winner List တင်ပေးလိုက်ပါပြီ ခင်ဗျာ
Congratulations To All Our Winners 🤩
🔥 🆂🅻🅾︎🆃 🅰︎🆅🅰︎🅸🅻🅰︎🅱︎🅻🅴 🔥
👹 Game2အတွက်
၁ Slot ကို ၅၀၀၀ကျပ် ကျသင့်ပြီး
နံပါတ်စဥ် ၁ ကနေ ၁၀၀ အတွင်း
Slot ကြိုက်သလောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
👹 ငွေလွှဲပြီးကြောင်း SS ပို့ပြီးတာနဲ့
••• Kpay Acc (or) Wave Acc ထဲသို့
တိုက်ရိုက်လွှဲနိုင်ပါသည်။ password မလိုအပ်ပါ•••
1. Ngwe Hnin Wai Wai
2. Kyaw Naing Tun
3. Thant Zin Htoo
4. Aung Ko Ko Oo
5. Thant Zin Htoo
6. Ko Khant
7. Thant Zin Htoo
8. Wint Lwin Oo
9. Thant Zin Htoo
10. Thant Zin Htoo
11. Thant Zin Htoo
12. Myat Khaing
13. Zaw Gyi
14. Soe Min Htet
15. Wai Lin Phyo
16. Thet Khaing Kyaw
18. Ko Gyi Kyaw
19. Wint Lwin Oo
20. Khine Zinthant
21. Thu Kyaw
22. Thant Zin Htoo
23. Thant Zin Htoo
24. Aquauian Thatoe
25. Naing Lin Htet
26. Shin Thant Bo
27. Kaung Htet
28. โจ๊ก โจ๊ก
29. Hein Swam Thu
30. Pyae Shan
31. Chaun Zhu Fang
32. Si Thaung
33. Thiha Sandar
34. U Thxa Latt
35. Kaung Htut Tayza
36. Victor Swe Myint
37. Nyi Nyi Paing
38. Khine Zinthant
39. Myat Khaing
40. Ko Shinn
41. Soe Min Htet
42. Shin Thant Bo
43. Ko Shinn
44. Htet Gyin
45. Wai Lin Phyo
46. Kaung Htet
47. KS Paing Zoe
48. Htet Naing Kyaw
49. Min Htet Kyaw
50. Kay Kay Axm X
52.Wai Lin Phyo
53. KS Paing Zoe
54. โจ๊ก โจ๊ก
55. Htet Gyin
56. Naung Shang Nom Foung
58. Thiha MinThu
59. Myat Khaing
60. Ye Htet Ko
61. Zin Min Thant
62. Si Thaung
63. Li Maung
64. Nyi Nyi Paing
65. Aung Phyo Min
66. Htet Gyin
67. Htet Aung Khaing
68. Ko Gyi Kyaw
69. Zin Mar
70. Tun Min Latt
71. Kaung Htet
72. Phyo Min Naing
73. Wai Lin Phyo
74. Myat Khaing
75. Hein Lay
76. โจ๊ก โจ๊ก
77. Htet Gyin
78. Thant Zin Htoo
79. Naung Shang Nom Foung
80. Aung Naing Min
81. Naw Mar Lwin
82. Oo Chan Nyein
83. Aung Naing Min
84. Sanchaung Myanmar
85. Ye Htet Ko
86. Ko Khant
88. Htet Gyin
89. Kay Kay Axm X
90. Sec Ret
91. Kyaw Swar Min
92. Htet Gyin
93. Htet Naing Kyaw
95. Myat Khaing
96. Saw Kyi Phyu
97. Ko Gyi Soung
98. T H Aung
99. Thant Zin Htoo
100. Wai Lin Phyo
333 54th Street 1FL
Be the first to know and let us send you an email when Hygh Hope posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Sendamessage to Hygh Hope:
🔥 🆂🅻🅾︎🆃 🅰︎🆅🅰︎🅸🅻🅰︎🅱︎🅻🅴 🔥 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။🙏 👹 Game2အတွက် ၁ Slot ကို ၅၀၀၀ကျပ် ကျသင့်ပြီး နံပါတ်စဥ် ၁ ကနေ ၁၀၀ အတွင်း နှစ်သက်ရာနံပါတ်ကို ရွေးချယ်၍ Slot ကြိုက်သလောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ 👹 ငွေလွှဲပြီးကြောင်း SS ပို့ပြီးတာနဲ့ မိမိဝယ်ယူမယ့် နံပါတ်ကို အတည်ပြုလက်ခံပေးပါ့မယ်ခင်ဗျ။ ••• Kpay Acc (or) Wave Acc ထဲသို့ တိုက်ရိုက်လွှဲနိုင်ပါသည်။ password မလိုအပ်ပါ••• 1. Ngwe Hnin Wai Wai 2. Kyaw Naing Tun 3. Thant Zin Htoo 4. Aung Ko Ko Oo 5. Thant Zin Htoo 6. Ko Khant 7. Thant Zin Htoo 8. Wint Lwin Oo 9. Thant Zin Htoo 10. Thant Zin Htoo 11. Thant Zin Htoo 12. Myat Khaing 13. Zaw Gyi 14. Soe Min Htet 15. Wai Lin Phyo 16. Thet Khaing Kyaw 17. Yati 18. Ko Gyi Kyaw 19. Wint Lwin Oo 20. Khine Zinthant 21. Thu Kyaw 22. Thant Zin Htoo 23. Thant Zin Htoo 24. Aquauian Thatoe 25. Naing Lin Htet 26. Shin Thant Bo 27. Kaung Htet 28. โจ๊ก โจ๊ก 29. Hein Swam Thu 30. Pyae Shan 31. Chaun Zhu Fang 32. Si Thaung 33. Thiha Sandar 34. U Thxa Latt 35. Kaung Htut Tayza 36. Victor Swe Myint 37. Nyi Nyi Paing 38. Khine Zinthant 39. Myat Khaing 40. Ko Shinn 41. Soe Min Htet 42. Shin Thant Bo 43. Ko Shinn 44. Htet Gyin 45. Wai Lin Phyo 46. Kaung Htet 47. KS Paing Zoe 48. Htet Naing Kyaw 49. Min Htet Kyaw 50. Kay Kay Axm X 51. Nay 52.Wai Lin Phyo 53. KS Paing Zoe 54. โจ๊ก โจ๊ก 55. Htet Gyin 56. Naung Shang Nom Foung 57. AD 58. Thiha MinThu 59. Myat Khaing 60. Ye Htet Ko 61. Zin Min Thant 62. Si Thaung 63. Li Maung 64. Nyi Nyi Paing 65. Aung Phyo Min 66. Htet Gyin 67. Htet Aung Khaing 68. Ko Gyi Kyaw 69. Zin Mar 70. Tun Min Latt 71. Kaung Htet 72. Phyo Min Naing 73. Wai Lin Phyo 74. Myat Khaing 75. Hein Lay 76. โจ๊ก โจ๊ก 77. Htet Gyin 78. Thant Zin Htoo 79. Naung Shang Nom Foung 80. Aung Naing Min 81. Naw Mar Lwin 82. Oo Chan Nyein 83. Aung Naing Min 84. Sanchaung Myanmar 85. Ye Htet Ko 86. Ko Khant 87. AD 88. Htet Gyin 89. Kay Kay Axm X 90. Sec Ret 91. Kyaw Swar Min 92. Htet Gyin 93. Htet Naing Kyaw 94. မိုးထွန်း 95. Myat Khaing 96. Saw
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ 🙏 “Game Of Chance” by Hygh Hope Game ONE အတွက် Slot 25 နေရာ ရဲ့ နာမည် စာရင်းပါ။ 1. Aung Ye Myint 2. Paing Soe Tun 3. Myat Su May Thaw 4. Bunny Fu 5. Aung Thiha Zaw 6. Nay Lin Htoo 7. Kyaw Zeyar Lin 8. Aung Ko Khant 9. Thaw De 10. Htet Gyin 11. Aung Gyi 12. Nay Myo Oo 13. Zin Mar Aung 14. Aung M Tun 15. Paing Nyein 16. Min Khant Saing 17. Nga Oak 18. Thet Khaing Kyaw 19. Min Nay 20. Wai Phyo 21. Mine Mine 22. Pay Tee Lone 23. Khant Zaw Thuya 24. Gabriel 25. Hein Swam Thu ပါဝင် ကံစမ်း သူများ အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူး တင်ပါတယ် ခင်ဗျာ Game TWO အတွက်လဲ စောင့်မျှော် အားပေးကြပါဦး နော့်! 😉
"BELU Neck Gaiter"
"BELU Neck Gaiter" သောကြာနေ့ Pre order ကောက်ရမလား ဗျို့?! 😊
👹 BELU Hoodie Quality Testing 👹
HYGH HOPE ကို BELU Tee နဲ့ 2019 မှာ စ ခဲ့ပါတယ် ပထမဦးဆုံး "တောင်းပန်" ချင်တာက #ဘီလူး_Tee ကို ယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး Pre order ရော Final sale မှာပါ ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြပြီး ကျနော့် လိုအပ်ချက်တွေကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်သက်နဲ့ ဖြည့်စွက် ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ Hygh Hope ရဲ့ #ကျေးဇူးရှင်_Customers တွေကိုပါ အဲ့ဒီ အချိန်တုန်းက တတ်သ၍ မှတ်သ၍ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် လိုအပ်ချက် တွေ အများကြီး ရှိနေခဲ့ပါတယ် ခုလည်း #လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး ရှိနေတုန်းပါ ခင်ဗျာ ဒါပေမယ့် Product တစ်ခု ထုတ်လုပ်ပြီးသွားတိုင်း လိုအပ်သမျှ ၊ မှားသမျှ ကို သင်ခန်းစာ ယူပြီး နောက် ထုတ်မယ့် Product ‌တွေ ပို၍ ပို၍ ကောင်းအောင် အမြဲတမ်း အချိန်ယူ ( ပြင်ဆင် ) ပြုပြင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီ ပို ကြိုးစားခြင်းအတွက် ရလဒ်ကိုတော့ ကျနော် ပြောနေလည်း အပိုစကား ဖြစ်မှာစိုးလို့ Hygh Hope Product တွေ လက်ဝယ် ရှိသူတွေကသာ အသိဆုံး ဖြစ်မှာပါလို့ ပြောပါရစေ ခင်ဗျ ပို၍ ကောင်းလာလည်း ပို၍ ပို၍ ကောင်းလာအောင် ထပ် ထပ် ကြိုးစားနေခြင်းကို ဘယ်တော့မှ #မရပ်ဘူး လို့ "#ကတိ" ပေးပါတယ် ခင်ဗျာ ခု Video လေးကတော့ September သို့မဟုတ် October မှာ ထွက်ရှိလာမယ့် HYGH HOPE ရဲ့ #𝙱𝙴𝙻𝚄_𝙷𝚘𝚘𝚍𝚒𝚎_𝚀𝚞𝚊𝚕𝚒𝚝𝚢_𝚃𝚎𝚜𝚝𝚒𝚗𝚐 ပါ ဗျ ပထမဦးဆုံး #BELU_Tee ကို ဝယ်ယူခဲ့ကြသော နောက်ထပ် Product များကိုလည်း အားပေးကြသော ခုချိန် မဝယ်ကြရသေးပေမယ့် အချိန်တိုင်း ပို၍ ပို၍ ချစ်ပေးကြ အားပေးပေးကြသော HYGH HOPE ARMY ရဲ့ အမာခံ BELU Soldier ( ဘီလူး စစ်သည်တော်များ ) နဲ့ HYGH HOPE ရဲ့ ပထမဆုံးနေ့ မှ ယနေ့ အထိ မေတ္တာသက်သက် ဖြင့် အားဖြည့် ကူညီ ပံ့ပိုးကြသော Artist များ Celebrity များ အနုပညာရှင်များ Family And Friends အားလုံး တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းဆီတိုင်းကို ကျေးဇူး တကယ်ပါ 🙏 🤎 ချစ်တယ် 🤎
#hyghhope #hyghhopearmy #belusoldiers #seenoevil #hearnoevil #speaknoevil #ချစ်တယ်
#ဆိုးယုတ်ခြင်း_များ_မမြင်လိုပါ #ဆိုးယုတ်ခြင်း_များ_မကြားလိုပါ #ဆိုးယုတ်ခြင်း_များ_မပြောလိုပါ
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ! 🙏 HYGH HOPE ARMY နဲ့ Hygh Hope Family တို့ရဲ့ စုပေါင်း ကုသိုလ် "#Civilian__3_Layer__Non_Woven #Protective__Masks__အခုရေ__၁__သောင်း" မြန်မာပြည်ကို နောက် ၁ ပတ် နဲ့ ၁၀ ရက် အတွင်း ရောက်ပါမယ် ခင်ဗျာ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က လိုအပ်နေတဲ့ #ဆေးရုံများ ကို တတ်နိုင် လက်လှမ်းမှီ သ၍ ခွဲခြမ်း လှူဒါန်း သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ HYGH HOPE က ပြုသော ကုသိုလ် ကို လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သား တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်း သို့ အမျှ အမျှ အမျှ ပေးဝေငှပါ၏ သာဓု ၃ ကြိမ် ခေါ်ဆို၍ ကုသိုလ် မျှဝေ ယူပေးကြပါ ခင်ဗျာ! 🤎ချစ်တယ်🤎
အဲဒိ့ @lunna_ ဆိုတဲ့ instagram အကောင့် ကို တစ်ချက် ဝင် ရှိူး ကြည့် သူ ဘယ်သူလဲ, ဘာလဲ, follower ဘယ်လောက်လဲ ပေါ့ Video အောက် ထောင့် ညာဖက် မှာ သူ ရေးထားတာလေး ကိုပါ တဆက်ထဲ ရှိူး ဗျာ စကားတွေ အများကြီး ပြောရမှာ မော လို့!! 😉😎🤫 🤎ချစ်တယ်🤎
Redline Screen Printing INC.
5518 3rd Ave
G6 NY Events
311 57th St, New York
Mark Kauffman, Photographer
170 53rd Street Suite 327, New York
57 57th St, Ste 650
73 Hudson Street, New York
342 61st Street 3fl
58 50th Street 6th Floor
Moon Marketing Works
Other Design & Fashion in Brooklyn
Shop Local Color NYC
Simply Nia Design
161 Utica apt E
Sew What Experience
394 McGuinness Boulevard
အရမ်းလန်နေရော် 😘 Hope
ဘီလူးလဲစီးမယ် ဘီလူးလဲဝတ်မယ် ဘီလူးလဲဆွဲမယ် ဘီလူးလဲကိုင်မယ်ဘာလိုသေးလဲပြော
နောက်ဆုံးတော့ ရရှိခဲ့ပြီ... စောင့်ရတာကြားတယ် ဆိုပေမယ့်... စောင့်ရကျိုးတကယ်နပ်အောင် အကိုရဲ့စေတနာမေတ္တာ တွေကို တွေ့ရပါတယ်ဗျာ... ...Thz u Hygh Hope... 😎...I am Belu soilder (124)...😎
Hygh Hope ကို ဘယ္လို စသိတာလဲဆိုရင္ အိ္မ္က ခ်စ္ေသာ အမ်ိဳးသားေၾကာင့္ပါ သူက Hygh Hope က ပစၥည္းဆို အရမ္းႀကိဳက္တဲ့သူ ကိုယ္ကေတာ့မသိ ကိုယ္ျမန္မာျပည္ျပန္လာေတာ့ လိုခ်င္တဲ့ Hygh Hope က # BELU_Bandeezie ေလး သူမသိေအာင္ မွာလိုက္တယ္ limited edition ထဲက အမဲေရာင္ေလးေပါ့ ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္လာေတာ့ ဖြင့္ၾကည့္ၿပီး quality ကို ႀကိဳက္သြားတယ္ size ကလည္း ေတာ္ေတာ္ႀကီး ပထမေတာ့ ခ်စ္ခ်စ္ကို ျပန္ေရာက္မွ surprise လုပ္မယ္ေပါ့ မေနႏိုင္ထဲအဆံုး ေျပာလိုက္ေရာ Review ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမေရးတတ္လို႔ ေယာက္်ားကို ေရးခိုင္းမယ္ေပါ့ ဒီလိုနဲ႔ Hygh Hope page ကို အၿမဲလိုလို ဝင္ၾကည့္ျဖစ္တယ္ ဘာအသစ္ ထပ္ထြက္မလဲေပါ့ ကံစမ္းမယ့္ ေဖါက္တာလည္း ကိုယ္ေတာ္ေတာ္ ကံထူးတယ္ေျပာရမယ္ ေနာက္ဆံုးမွ ပါတာပါ ခုေတာ့ ကံစမ္းမဲေပါက္တဲ့ ဟာေလး ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္လာၿပီ အနီေရာင္ေလးပါ အရမ္းႀကိဳက္😘 ေက်းဇူးပါ #Hygh_Hope ေရ ေနာက္လည္း အားေပးသြားမယ္ေနာ္
Hygh Hope ရဲ့ မေတ္တာလက်ဆောင်အား လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း!! Quality ပိုင်းရော ဆေးသားရော ရှယ်မိုက်တယ်ဗျာ🖤 ကျေးဇူးပါ Hygh Hope ရေ ❤ 🍾🎉🎉 #HyghHope #StayLowkey #HopesUpHigh
ဘာ​ေတြလဲဟာ ​ေတာ္​သင္​့ၿပီထင္​တယ္​ ဂ႐ုစိုက္​လို႔​ေတာ့မဟုတ္​ဘူး မႀကိဳက္​ရင္​ မဝယ္​နဲ႔​ေပါ့
ကိုယ္​​ေတာ့ coment သြား​ေရး ထားၿပီး သူတို႔႐ိုင္​းတိုင္​း မ႐ိုင္​းထားဘူး
အရမ္းႀကိဳက္တယ္ Hygh Hope